हाम्रो पार्टी नेतृत्व घेराबन्दीमा प¥यो - Vishwanews.com
नेकपा नेता, एवम् सांसद
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीहरु र सार्वजनिक रुपमा राजनीतिक नियुक्ती लिएर बसिरहेकाहरुको व्यवहारले आम नागरिक दिक्क बन्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले छौँडा भन्ने शब्द प्रयोग गरेर आन्तरिक राजनीतिमा आरोप–प्रत्यारोपको जुहारी चलेको छ । नेपालमा अहिले यो विषय सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमालको उक्त स्टाटसका बारेमा उनले व्यक्तिगत भावना भनेर टिप्पणी गरे पनि उनी पार्टीभित्रै आलोचित बनेका छन् । सरकारको कामको गति कमजोर बनेको छ भने काममा पनि त्रुटिपूर्ण व्यवस्थापन हुन थालेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित भएर हामीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवम् सांसद यज्ञराज सुनुवारसँग कुराकानी गरेका छाँै ।
तपाईंलाई विश्व न्युज र विश्वसन्देश साप्ताहिकमा स्वागत छ ।
धन्यवाद, अमेरिकामा रहने सम्पूर्ण नेपालीमा मेरो हार्दिक नमस्कार । मेरो भावना विश्वसन्देशले अमेरिकासम्म लैजाने काम गरेको छ । त्यसैले यो पत्रिकालाई मैले विशेष आभार भन्नै पर्छ ।
सरकारको काम गर्ने गति किन बिग्रिएको ?
पक्कै पनि तपाईंले विभिन्न विधेयक र निर्णयमा कुरा गर्नुभएको होला । संसद्मा ल्याउने विधेयकमा सरकार स्वतन्त्र छ । तर, विधेयक ल्याउँदा बहस गर्नुपर्नेमा त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । नागरिकले गरेको अपेक्षाअनुसार काम नभएको सत्य हो । कतिपय निर्णयमा जुन परिपक्वता हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकिरहेको छैन ।
त्यसको अर्थ नेकपामा परिपक्व निर्णय गर्ने व्यक्ति छैनन् भन्न खोज्नुभएको ?
संसद्मा भएका वा बाहिर भएका विज्ञहरुसँग छलफल गरेर ल्याउनुपथ्र्यो, त्यो अझै पुगेको छैन भन्न खोजिएको हो । पार्टीमा धेरै विज्ञ साथीहरु हुनुहुन्छ । कतिपय अवस्थामा संसद्मा विधेयक दर्ता गर्न पाउँदैन, प्रतिपक्षको सहमतिमा ल्याउनुपर्छ, सरकारले पेलेर ल्यायो भन्नेजस्ता कुराहरु पनि भएका छन् । हामी संसद अवरुद्ध गर्छौँ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति गलत हुन् ।
विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ, किन ?
निर्णय हतारमा गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने जस्तो प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । अहिले सरकारले विषादी परीक्षणमा लिएको निर्णय ठीक थियो । सरकारले विषादी परीक्षण गर्ने काम गरेको थियो त्यो राम्रो भएको थियो । तर, पछि हट्ने काम भयो त्यो कमजोरी भएको छ । सरकारले परीक्षण नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गरेको छैन । सरकारले पहिले नै आवश्यक तयारी गरेको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो ।
आम नागरिक भने निराश हुन थालिसके । तपाईंहरुले कम नगरेर ?
सरकारले भौतिक पूर्वाधार, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी राजमार्ग लगायतका क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको छ । सरकारको एउटा निर्णयले मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन । विषादीयुक्त कुरा खानेकुरा हामीले खाइरहेका थियौँ । अब भने हामीले ती खानेकुराहरु खानु हुँदैन भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । विषादी त हामीले वषौँदेखि खाइरहेका थियौँ ।
भारतको दबाबले यसरी निर्णय फिर्ता लिदा राष्ट्रियताप्रतिको अडान खोक्रो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएन ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएका कारण हामीले राष्ट्रियताका विषयमा प्रश्न गर्नु आवश्यक छैन । हामी राष्ट्रियताको विषयमा हामी अनवरत संघर्ष गर्दै आएका छौँ । त्यसैले हामीले राष्ट्रियतामा प्रश्न उठ्न दिँदैनौं । राष्ट्रियताको पक्षमा काम गरेको नेकपाको सरकारले कसैको दबाबमा निर्णय गर्दैन । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएकाले राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्छ । म विश्वास दिलाउन चाहन्छु आम नागरिकको मनमा ठेस लाग्न दिँदैनौं ।
तपाईंको पार्टी नेतृत्वको सरकारले काम त राम्रो गर्न सकेन ?
हामीले एक वर्षको अवधिमा कानुन निर्माण गर्ने काम गरेका छौँ । नीति निर्माणमा हामीले समय खर्च गरेका छौँ । अबको समय भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा काम गर्ने समय आएको छ । समृद्धिको यात्रामा हामी लाग्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
सल्लाहकारबाटै पदीय मर्यादा विपरीतका अभिव्यक्ति आउन थाले, कसरी पत्याउने ?
प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार वा राजनीतिक नियुक्ती लिएका व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले दिएको अभिव्यक्ति राम्रो छैन । सल्लाहकारहरुका विषयमा प्रश्नहरु उठेका छन् ।
बोल्ने शब्द र गर्ने व्यवहार संस्कारयुक्त हुनुपर्छ । मैले विष्णु रिमालजीको ट्वीट हेरेँ । सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिले बोल्ने र लेख्ने कुरा शब्द–शब्दमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । तर, लागेको कुरा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले राख्नु उपयुक्त हुँदैन । लागेका कुरा जहाँ पायो त्यहाँ राख्नु हुँदैन ।
सरकारको काम मात्र होइन, पार्टी एकताका बाँकी काम राम्रोसँग भएको छ त ?
राष्ट्रिय अभियानमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । पार्टी एकताको विषयमा पनि अल्झन आएका छन् । तीन महिनामा सक्नुपर्ने काम अहिलेसम्म पार्टी एकताका बाँकी विषय टुंगो लागेको छैन । हाम्रो नेतृत्वले किन ससाना कुरामा ध्यान दियो ? मेरो पनि प्रश्न छ ।
राम्रो काम गरेको नेतृत्वलाई सानो घेराबन्दी गर्नु राम्रो होइन । हरेक शक्तिशाली नेताको पछाडि स्वार्थ समूह हुन्छन् । नेताहरुलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार अगाडि बढाउने उनीहरुको चाहना हुन्छन् । तर नेतृत्वले फरक तरिकाले निर्णय गर्नुपर्छ । दोष नेतृत्वलाई जान्छ । असफल हुने छुट र ढिलो गर्ने छुट सरकारलाई छैन ।